Inter Milan oo xagaaga u xusul duubaysa xiddigeedii hore ee Diego Simeone – Gool FM
Inter Milan oo xagaaga u xusul duubaysa xiddigeedii hore ee Diego Simeone
Raage April 16, 2017
(Milano) 16 Abriil 2017 – Barbarradii Inter ay 2-2 kula noqotay AC Milan jeer ay ciyaarta inteeda badan ku hoggaaminaysay 2-0 ayaa sida lasoo sheegayo waxay arbiciinka gelinaysaa muctaqbalka macallin Stefano Pioli iyagoo xagaaga u xusub duubaya inay soo xera geliyaan xiddigoodii hore ee Diego Simeone.
Kooxda Nerazzurri oo 4 kulan ka hor u sharraxnayd booska ugu dambeeyay Champions League ayaa 2 dhibcood uun ka heshay afartii kulan ee ugu dambeeyay iyadoo guuldarro kala kulantay Sampdoria iyo kooxda heerka 2-aad ka ordaysa ee Crotone.
Antonio Conte ayaa markii hore dookha 1-aad u ahaa, balse wuxuu caddeeyay inuu doonayo inuu sii joogo Chelsea, taasoo uu sanadkiisii 1-aad u sharraxan yahay Premier League, sidaa darteed ninka xiga ee ay doonayaan waa Simeone, oo Inter u dheeli jirey marar badanna sheegay inuu jeclaan lahaa kusoo noqoshada San Siro.
Wuxuu dhowaantan soo gaabiyay qandaraaska Atletico Madrid oo uu ku ekeeyay Juun 2018, taasoo ka dhigan inuu bixitaan maanka ku hayo, warsidaha La Gazzetta dello Sport ayaa qoraya in si Inter ay u qanciso El Cholo ay doonayso inay siiso awoodo dheeraad ah oo aan laga aqoonin Talyaaniga isagoo isku noqonaya macallin iyo maareeye isboorti iyagoo u saxiixaya qandaraas 5 sano ah.
Haddii ay waayaan dadka ay u weecan doonaan waxaa ka mid macallinka Hull City ee Marco Silva, oo xiriir la leh ninka laga yaabo inay Inter maamulka kusoo darsato ee Walter Sabatini.
Gareth Bale oo seegaya kulanka Real Vs Bayern
Dybala oo wajihi kara Barcelona...Waa sidee xaalkiisa?